Raadinayo si uu u daawado ee lagala soo bixi FLV videos on your TV shaashad weyn? Thanks to YouTube, VEVO, Hulu iyo goobaha kale ee online video oo noo soo bandhigaysaa ku jira si badan u cusboonaysiinta iyo xiiso leh si uu u daawado. Si kastaba ha ahaatee, ma aanan noqon doonaa si aan u daawado sida waxa hoorto online-kayaga PC si toos ah ula TV karin. Nasiib wanaag, ma jirto Wondershare ku Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ), waxaad tahay ma aha oo kaliya in ay iyaga soo bixi laakiin sidoo kale iyaga loogu badalo in ay qaab socon in a MPEG qaab guud oo ku haboon yahay playbacks on ugu telefishannada in la heli karaa maanta awoodaan.
Waxaad xaq u leedahay halkan kala soo bixi kartaa version maxkamadda!
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan waxa cross-madal waana ku haboon download gal labada Windows ama kumbiyuutarada Mac-ku-saleysan. Fadlan hubi in aad soo bixi version sax ah ka hor inta tilmaamaha hoos ku sameeyaan.
Orod software this ka dibna riix Download inay galaan suuqa kala barnaamijka ayaa ka duuban. Ka dib markii in, dhirtuba ay aad u xiiseyneyso FLV videos on YouTube ama goobaha la wadaago video kale oo iyaga u ciyaaro. Haddii kale, gasho website YouTube ee la Firefox, IE, Chrome ama Safari browser gal ka dibna soo qaado jecel videos aad u ciyaaro.
Si aad u soo bixi videos FLV ah, waxaad qabtaa laba fursadood.
Just riix Download button in si toos ah soo booda ee dhinaca kore ee midig ee video ciyaartoyda, ama
Copy URL video ah YouTube ee ka dibna riix ka Add URL badhanka si ay u paste on suuqa kala barnaamijka.
Haddii aadan ka war hayso, ka soo bixi YouTube videos inta badan ku yimaadaan qaab qaab FLV ah, taas oo aan la jaan aad TV (Samsung TV waxaa ka mid ah). Sidaas, aad leedahay doonaa si loogu badalo videos FLV ka hor. Just tagaan si ay Dhameyso maktabadda si ay u riix batoonka in ay dhinaca midig ee bar ka video item aad rabto in aad ka dooratid badalo si ikhtiyaar. Markaas, sii wado in ay doortaan qaab aad doonayso inaad wax soo saarka ka soo Qaabka Output liiska hoos-hoos 's. Waxaad dooran kartaa oo ka mid ah qaabab file uu taageero ballaaran ka wmv ah, MP4, AVI iyo VOB in Mpg ka Qaabka > Video category.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad beddesho dhimaya ee dejinta in ay isu barbar aad TV dhammaataan, waxaad sidoo kale riixi kartaa Settings button ka yar qaab icon si aad gacanta qabsato.
3 Ku bilow inaad kala soo baxdo iyo badalo FLV in TV
Ka dib dooranaya qaab wax soo saarka, hadda riix Beddelaan furmkidoona-off dajinta iyo diinta waqti isku mid ah. Barnaamijkan waxa dhab ahaantii wax ku ool leh awoodda diinta ilaa 30X dhakhso leh tayo sameecadda ah iyo sidoo kale haboon videos H.264 ah.
Talooyinka Daawashada FLV on TV:
1. In hago kor ku xusan, waxaan kaliya ka hadlay YouTube ee FLV dajinta iyo diinta sida tusaale. Dhab ahaantii, Converter video ay sidoo kale taageertaa vimeo, Hulu, Yahoo iyo Facebook videos. Sida goobaha video aan loo fududeeyo dajinta, waxa kale oo aad isku dayi kartaa shaqo ay duubo.
2. Fadlan u gudub talaabada 1 haddii aad horey u leeyihiin qaar ka mid videos FLV kaydiyaa on your computer. Haddii aad rabto in aad ku gubi videos FLV eee DVD ah loo maqli on TV ciyaaryahanka DVD guri, waxa kale oo aad isticmaali kartaa video Converter si loo abuuro kuu gaar ah DVD video. Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan tixraac Guide User halkan.
Bareesada-tago /-socodka & Codecs Wixii Windows Movie Kan sameeyey,
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan iyo Play Videos FLV on TV